Zawgyi-One FlipFont(new) v1.0 ( 4.2.2 + ) - .::just for share::.
Home » android apps » android ဖုန်းဆိုင်၇ာ » Zawgyi-One FlipFont(new) v1.0 ( 4.2.2 + )
Zawgyi-One FlipFont(new) v1.0 ( 4.2.2 + )
Myanmar developer MYOMINLATT ဖန်းတီးပြုလုပ်ပေးသော Zawgyi-One FlipFont(new) လေးပါ ။
December 7, 2013 ၇က်နေ့ က အသစ်ထပ်မံထွက်ရှိလာတဲ့ Flip Font အသစ်လေးပါ ။
s4 နဲ့အန်းဒရွှိက် 4.2.2 နဲ့ အထက်မှာ အဆင်ပြေချောမွေစွာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Root မလိုအပ်ပါဘူး ၊ Display / style font / ချိန်းပေးယုံနဲ့ဖောင့်စတိုင်လှလှလေးအသုံးပြု နိုင်မှာပါ။
လှပတဲ့ ဖောင့် 14 မျိုးပါဝင်ပါတယ် ၊ root မဖေါက်ချင်တဲ့ သူများအတွက် မြန်မာစာကို လွယ်ကူချောမွေစွာ
အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ဗားရှင်း 4.3 သမားတွေ အတွက် ရှယ်ပေါ့ဗျာ .... :D
ပလေးစတိုးမှာ လေ့လာရင်း Zawgyi-One FlipFont(new) လေးကို စတားလေးတွေ ပေးရင်း ဂုဏ်ပြု ပေးရ
အောင်ဗျာ .... :)
2/ data file host
copy >>> ffspg